Izindaba - Kulindelwe amathemba emakethe elwa ne-powder elwa namagciwane
I-Antibacterial powder enamathela emakethe amathemba angalindelwa
Ngokuya kocwaningo lwakamuva olwenziwe ngabakwaMarket & Markets, imakethe yomhlaba wonke yezingubo zokulwa ne-antibacterial powder izoba cishe ama- $ 1.5 billion ngonyaka we-2020 futhi ifinyelele ku- $ 2.7 billion ngo-2025, ngezinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe elifinyelela ku-12% ngalesi sikhathi. Ngenxa yomthelela wesifo esiwumshayabhuqe se-COVID-19, ukufunwa kwezingubo ze-antibacterial powder emkhakheni wezempilo kuyaqhubeka nokukhula, futhi ngokuzayo, izinga lokunakwa kwezingubo ze-antibacterial powder lizoqhubeka nokukhuphuka.
Isimo somhlaba sibi, futhi isibalo sabantu abanegciwane sisakhula. Ukuze iziguli zikwazi ukwelashwa okufanele nokunqanda ukubhebhetheka kwaleli gciwane, sekubekwe izibhedlela nezikhungo zesikhashana emazweni amaningi. Lezi zindawo, kufaka phakathi izibhedlela zasekuqaleni, zinesidingo sokusebenzisa ama-antibacterial powder ezinamathela, njengezibambo zeminyango, imibhede, imishini yokuxilonga, njll. Lokhu kudlale indima enhle ekulweni nenoveli yeCoronavirus.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi emazweni athuthukile nasezifundeni, isidingo sokufakwa kwesimo somoya nomoya (HVAC) ezindaweni zokuhlala, ezentengiselwano, ezikhungweni zomphakathi, ekukhiqizweni kwezimboni nakwezinye izindawo kukhombisa ukuthambekela kokwanda okusobala. Kodwa-ke, ohlelweni lokusakazwa komoya, ithonya lesikhunta kukhwalithi yomoya yikona okukhathazeka kakhulu kohlelo lwe-HVAC. Izikhunta zesikhunta ezivela ngaphandle zingena ohlelweni lwe-HVAC futhi zisabalale ngamapayipi kulo lonke ibhilidi, okwakha amakoloni amasha esikhunta. Amaphesenti angaphezu kwama-80 ekhwalithi yomoya yasendlini kanye nokungezwani komzimba kubangelwa isikhunta, ngokusho kweWorld Health Organisation. Izinhlangano eziningi zikahulumeni nezinhlangano zezimboni zisungule izindinganiso nemithethonqubo yekhwalithi yomoya yasendlini ezakhiweni. Njengesilinganiso sokuvikela, ukumbozwa kwe-antimicrobial powder akugcini nje ngokuvimbela ukukhula kwesikhunta namanye amabhaktheriya, kepha futhi kunciphisa izindleko zokugcinwa kwezinhlelo ze-HVAC.
Izindinganiso zomhlaba jikelele kanye nemithethonqubo yekhwalithi yomoya yasendlini nayo ilungisiwe ukuphendula ukuqubuka kwe-COVID-19, okuholele ekukhuleni okukhulu kwesidingo sokwelashwa kwe-antimicrobial coating kuzinhlelo ze-HVAC. Ngokuqwashiswa kwekhwalithi yomoya nokwanda kwesidingo sokufakwa kwesistimu ye-HVAC, ukumbozwa kwama-antimicrobial powder emhlabeni jikelele kulindeleke ukuthi kuqhubeke nokukhula ngamazinga aphezulu eminyakeni embalwa ezayo.
Emazweni athuthukile nezifunda, imikhiqizo elwa namagciwane nayo kufanele ihambisane nezindinganiso nemithethonqubo ekhishwe yizikhungo zikahulumeni wasekhaya. E-United States, isibonelo, ukumbozwa kwama-antibacterial powder kumele kuhambisane nemithetho ye-EPA. Ngaphambi kokuvunywa, i-antimicrobial powder enamathela kufanele ihlolwe ingozi futhi ikhonjwe yisikhungo esizimele socwaningo lwesayensi, umzimba (njenge-EPA, i-FDA, njll.) Ngaphambi kokuba inikezwe imvume yokungena emakethe. Ngaphezu kwalokho, kwezinye izindawo, ikakhulukazi emkhakheni wezokwelapha, ubuthi be-nanoparticles yensimbi buhehe ukunakwa, buhlobene nezici zalezi zinsimbi hhayi i-nanoparticles morphology enomehluko omkhulu kakhulu, ikakhulukazi ekhombisa ubuthi nomsebenzi wezinto eziphilayo walezi zinsimbi, njengokuvezwa kwesiliva isikhathi eside, ukumbozwa ngethusi, kungakhuphula ubungozi bezempilo (njengesikhumba, izinkinga zokuphefumula, njll.). Ngakho-ke, ukukhula kwezingubo ze-powder elwa namagciwane kuyinselele enkulu.
Kukhonjiswa ukuthi njenge-ejenti elwa namagciwane, isiliva yisicelo esikhula ngokushesha kakhulu kwezingubo zokulwa ne-antibacterial powder. I-Silver ion inezinto ezinhle zokulwa namagciwane nezokulwa namagciwane futhi inobuthi obuphansi kumuntu. Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwezobuchwepheshe, abakhiqizi bokumboza basebenzise ngempumelelo ukugcotshwa kwesilivere elwa namagciwane kumadivayisi wezokwelapha (njengemishini yokuhlinza, ukufakelwa izicubu, njll.), Ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ukuthuthukiswa kwemakethe yokumboza i-antibacterial powder. Abahlaziyi bakholelwa ukuthi ukumbozwa kwe-antimicrobial powder yiyona ekhula ngokushesha kakhulu emkhakheni wezokunakekelwa kwezempilo. I-Antibacterial powder enamathela izinikele ekwakhiweni kwendawo ephephile nehlanzekile, ezibhedlela, izindawo zokuhlinza, indawo yokusebenza kwamazinyo (njengensimbi ehlanganisiwe, i-aluminium) ukwakha okokuvikela okuvikelekile, le mishini kubandakanya uhlaka lombhede, isihlalo sabakhubazekile, i-guardrail, ikheshi, inqola, njll., amathuba okuxhumana neziguli aphezulu, kulula ukunamathela kumagciwane, amabhaktheriya njalonjalo.
Ngokusho kocwaningo, iNyakatho Melika iyimakethe enkulu kunazo zonke emhlabeni yezingubo zokulwa ne-antibacterial powder, ngokukhula okuqinile eminyakeni emihlanu ezayo. ENyakatho Melika, kube nesidingo esandayo sokutholakala kwamagciwane egciwane ekunakekelweni kwezempilo, futhi imithethonqubo eqinile yekhwalithi yomoya yasendlini yenze abakhiqizi bohlelo lwe-HVAC basebenzise izimpushana ezilwa namagciwane ukuqinisekisa ikhwalithi yomoya. IYurophu iyimakethe yesibili ngobukhulu emhlabeni yezingubo zokulwa ne-antimicrobial powder, nezimakethe ezinkulu ezibandakanya iGermany, i-United Kingdom, iFrance, iSpain neRussia. Lokhu kungenxa yokwenziwa ngcono kokuqwashisa kwabantu ngenhlanzeko yokudla, ukuphepha kwekhwalithi yomoya yasendlini kanye nempilo esifundeni. Ngaphezu kwalokho, banaka kakhulu ukuphepha kwabasebenzi bezokwelapha neziguli, ikakhulukazi ngesikhathi sokuqubuka kwe-COVID-19. Enye yezindlela zokunqanda ukusabalala kwegciwane ukusetshenziswa kwe-antibacterial powder coating.